सबैको चर्को बिरोधपछि सोफा छोड्न बाध्य भए ओली-प्रचण्ड, भीम राववले बोल्दा क-कसले किन पड्काए तालि ? — Sanchar Kendra
सबैको चर्को बिरोधपछि सोफा छोड्न बाध्य भए ओली-प्रचण्ड, भीम राववले बोल्दा क-कसले किन पड्काए तालि ?
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरुले विरोध गरेपछि दुई अध्यक्षका लागि राखिएको सोफा हटाइएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बस्नका लागि मञ्चमा सोफा राखिएको थियो । अन्य नेताहरुका लागि कुर्सीको व्यवस्था थियो ।
बुधबार बैठक सुरुवातका दिन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दुई अध्यक्षभन्दा पछि राखेको भन्दै कार्यालय सचिवलाई आफू बस्ने कुर्सी अगाडि सार्न लगाएका थिए । शुक्रबारबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित थिएनन् । नेकपाको माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि नेताहरुले विरोध गरेपछि मन्ञ भित्तामा टाँसिएका दुई अध्यक्षका तस्बिर बैठकको बीचमै हटाएका थिए ।
६ महिनापछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकलाई उपेक्षा गरेकोमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना भएको छ । बुधबारबाट सुरु भएको बैठकमा शुक्रबार एजेन्डामाथि धारणा राख्ने क्रममा स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएकोमा आलोचना गरेका हुन् ।
यस्तै एमसीसीबारे विदेशमन्त्री पोम्पेओको चासोमा आफूले ‘संसदमा विचाराधीन छ, संसदले उपयुक्त निर्णय गर्ला’ भन्ने जवाफ दिएको मन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए । अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनर्रशिपमा अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय नगरेको र छलफल र अध्ययनका लागि एउटा कार्यदल बनाएको जवाफ मन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा दिएका थिए ।
बैठकमा स्थायी कमिटीको चालू बैठकमा वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटीको बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्षद्वयको सम्बोधन, कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार, नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र सांगठनिक एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, एमसिसी र विविध विषयको एजेन्डा छलफलका लागि प्रस्तावित छ । विविधअन्तर्गत भने रुकुम घटना, नागरिकता विधेयक र संघीय संसद्का सदस्यहरूको भत्ता कटौतीको विषय एजेन्डामा राखिएको छ । एजेन्डातयमै नेकपा बैठकमा विवाद भएको थियो ।
बैठकमा काेराेना कार्डकाे कहर
जापान, अमेरिकालगायतका मुलुकमा पनि यस्तो कार्ड प्रयोग नगर्न सुझाव दिइएको छ। एक अनुसन्धानले क्लोरिन डाइअक्साइड अनुमानका भरमा प्रयोग भइरहेको र यसले जीवाणुहरू मार्न सक्ने पुष्टि नभएको उल्लेख छ । बरु मानिसको फोक्सोमा असर परेको देखिएको छ